Maalinta: Sebtember 12, 2019
Duqa Magaalada İmamoğlu Waxaa lagu baarayaa Bayrampaşa Bus Station waxaana loo wareejiyay IMM
Madaxweynaha remBB Ekrem İmamoğlu wuxuu indha indheyn kusameeyay Xarunta Baska Bayrampaşa, oo howlaheedii lagu wareejiyay IMM kadib markii gawaarida la dhigto. Imamoglu wuxuu carrabka ku adkeeyay in milkiilaha cusub ee xarunta basku uu yahay IMM isla markaana uu la wadaago aqoonta ah in ganacsatada ay kirada siin doonaan machadka. saxafiyiinta [More ...]
Ciyaaraha Olombikada 2020 ee Tokyo, tartamada ugu dambeeya ee tartamada baaskiilka wadooyinka ee caalamiga ah oo lagu qabtay Kayseri. Munaasabadda sedexda maalmood ah, 10 90 cayaartooy xirfadleyaal ah oo ka socda dalka 430 km ayaa lasaaray. [More ...]
Turkey ayaa Kardemir Lagu soo caaryada ee ugu weyn Ingot
Ingot ugu weyn KARDEMİR Turkey ayaa Lagu soo caaryada ah: Turkey ee caaryada iyo malqacad iyo ingot ugu muhiimsan kardon ku yaalla saarayaasha (KARDEMİR Casting Machine Warshadaha iyo Ganacsiga Co.), TCI (mishiinada iyo [More ...]
TUDEMSAS Shaqaale Wadne qabad wadnaha bilowgii waajibaadkooda ayaa loo diray safarkooda ugu dambeeyay. Turkey Railway Machines Industry Inc. ay sabab u tahay R & D Department of Daabacaadda ee shaqaalaha Fuat Korkmazgil ilmada safar ee ugu danbeysay ee shalay [More ...]
Shaqo ayaa ka socda waddooyinka tareenka ee cusub ee Eskişehir
Daraasadda dhexdeeda oo ay si wada jir ah u fuliyeen Eskişehir Metropolitan District iyo Estram General Directorate, shaqooyinka marinnada dhaadheer waxaa lagu fuliyaa isgoysyada halkaas oo ay taraafikada taraafikada iyo isgoysku ay sareyso. Isgoyska heerka [More ...]
Kulamada Weyn ee Sunflower Baaskiilka Dooxada
Ekrem Yüce, Duqa Magaalada Caasimadda, wuxuu ku casuumay dhammaan taageerayaasha isboortiga tartamada tartamada UCI MTB Cup Marathon kaas oo lagu qaban doono hal-ku-dhigga 'Pedal for a World World' bisha 13-15 Sebtember. [More ...]
Shuruucda Gawaarida Gaadiidka ee Konya
Dowlada Hoose ee Magaalada Konya waxay qabataa howlo lagu hubinayo badbaadada nolosha iyo hantida dadka lugeynaya ee taraafikada. Dhisidda isgoysyo iyo jidad cusub oo loogu tala galay socodka dadka lugeeya iyo socodka baabuurta ee magaalada oo dhan [More ...]
TCDD 1 ayaa u imaanaysa magaaladeenna baaritaanno iyo baaritaanno kala duwan. Agaasimaha Gobolka Levent Meriçli, oo ay wehliyaan wafdiga ayaa booqday gudoomiyaha gobolka Ahmet Hamdi Nayir. Ka dib markii ay baaritaan ku sameeyeen Eskişehir, waxay u gudbeen Sakarya [More ...]
Gawaarida TCDD Inc. Xeerka Agaasinka guud ee kormeeraha anshax marinta la daabacay
Republic of Turkey General Directorate of Tareennada Transport Company Stock State Joint Disciplinary Kormeerayaasha Regulation. Gaadiidka TCDD Co. Agaasinka Guud ee Turkish Tareennada State GAADIIDKA KAMBANI GUUD Agaasinka XEERARKA ANSHAXA maamula Ujeeddo: [More ...]
Turkey Railway Machines Industry Inc. Assessment dheeraadka ah iyo Iibinta Hantida Regulation. Tareenka Machines Industry Corporation of Turkey: tareenka Turkiga MAkIINADAHA Warshadaha DHEXAYSA Stock SHIRKADDA BAAHIDA HANTIDA DHEERAAD AH IYO QIIMEYNTA [More ...]
Degmada Çorlu ee Tekirdağ, 25 dad ayaa la dilay, 328 dad ayaa ku dhaawacmay tijaabada labaad ee shilka tareenka ee Xarunta Waxbarashada Dadweynaha Çorlu ayaa sii socota. Sida lagu sheegay warbixinta Gökay Basca Birgun; Shalay ayaa la arkay maantana [More ...]
RayHaber 12.09.2019 Warbixinta Shirka
Kuleylka Dhismooyinka iyo Dayactirka kuleylka
Isuzu Novociti Life 2 Yurub. Bilaabey Demo Demo
Anadolu Laanguruusalada soo saaray in warshadaha ee Turkey iyo Turkiga sida ugu dhaqsaha badan hogaamiyaha dunida ee ay qeybta ku fadhiyey Laanguruusalada Novocit Life, 2 in Europe ka leexinayn ee dallacaadaha dibada. Bilaabey socdaalka demo-ga. Ugu horeyn 2018 [More ...]